FAQs - Smart Weight Packaging Machina Co, Ltd.
Mitengo yedu inoenderana neprojekiti yako nezvinodiwa. Isu tichakutumira iwe yakagadziriswa mutengo rondedzero mushure mekambani yako inotibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Kwete, yedu MOQ ndeye 1 set umshini. Ehezve, iyo yekudyara chikamu MOQ haisi 1 pc.
Ehe, isu tinogona kupa CE chitupa, chikafu-giredhi isina simbi 304 chitupa, rezinesi rebhizinesi nevamwe.
Kazhinji, kugadzirwa kwemutsara wakakwana ndeemazuva makumi mana. Imwe yunivhesiti yemuchina ndeye mazuva makumi maviri. Kana iwe uine yekukurumidzira kuraira, iwe unogona kutibata nesu, pamwe wako unodiwa muchina uri muchitoro chedu.
Iwe unogona kuita kubhadhara kune yedu bank account, TT kana LC.
Mwedzi gumi nemashanu kubva pakutumirwa. Isu tinopa warti yemagetsi zvikamu zvedu uye basa. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune garandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando yekutengesa kunze. Isu tinoshandisawo hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine ngozi uye yakasimbiswa inotonhorera yekuchengetedza vafambi kune tembiricha inonzwika zvinhu. Nyanzvi yekurongedza uye isiri-standard packing zvinodikanwa zvinogona kuunza imwe mubhadharo.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Iyo airway ndiyo inokurumidza asiwo nzira inodhura kwazvo. Mvura yegungwa ndiyo mhinduro yakanakisa yemari yakakura. Mitengo yekutakura chaiyo tinogona kungokupa kana isu tichiziva iwo huwandu hwehuremu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.